Zvinyorwa Zvinyorwa zveZuva: Luis Cernuda naSam Shepard | Zvazvino Zvinyorwa
Zvinyorwa Zvinyorwa zveZuva: Luis Cernuda naSam Shepard
A priori, Luis Cernuda naSam ShepardIvo havana chavakafanana, asi izvo chete, pamberi. Pamusoro pekuda kwavo kwakajairika kwemabhuku, vanobatanidzwawo nenhamba, 5. Kunyanya nhasi, Mbudzi 5. Pazuva rino, mumwe akazvarwa uye mumwe akafa, hongu, makore mazhinji akasiyana. Pazuva rino sepanhasi Sevillian Luis Cernuda akafa muMexico City muna 1963. Sam Shepard akazvarwa musi waNovember 5, 1943 muIllionois, United States.
Heino zvishoma zvishoma zveimwe neimwe, munzira yedu pachedu uye sechinhu chakakosha Mugovera chinhu.
1.1 Mitsara uye ndima dzanyanduri
2.1 Mitsara nemunyori anoshanduka-shanduka
Nyanduri weSevillian akambonyora kuti:
«Nhetembo kwandiri ndeyekuti ndine wandinoda naye. Ini ndinonyatsoziva kuti ichi chiganho. Asi kukamurwa nekukamurwa ndiko kunogamuchirwa kupfuura zvese. Mamwe ese aya mazwi anoshanda chete chero vachitaura zvandisina kufunga kana zvandisingadi kutaura. Mune mamwe mazwi, kutengesa. Kana iwe ukaparadzana neni, regai zvive zvekunditengesa. Mhepo inozokukanganisa nenyaya dzayo pfupi. Ndichakanganwa chinhu chimwe chete icho muti nerwizi zvinokanganikwawo ».
Luis Cernuda aive weboka reboka revanyanduri vanozivikanwa se Chizvarwa che27. Mutemo akapedza kudzidza uye mutsigiri weRepublic, akaenda kuutapwa mushure meHondo Yenyika kuEngland, United States neMexico, kwaaizopedzisira afira.
Mubasa renanyanduri kupokana pakati pe "chokwadi uye chishuwo" kunogara kuripo, muchokwadi, basa rake rese renhetembo kubvira 1936 rakarongedzwa pasi pezita rimwe chete. "Ichokwadi uye chishuwo".
Iyi poetic yekushanduka inogona kukamurwa muzvikamu zviviri, kunyanya izvo zvinoenderana pamberi nepashure pehondo. Yekutanga inoratidza shanduko kubva nhetembo yakachena («Mbiri yemhepo», 1927) kusvika a surreal simba ("Zvinorambidzwa Zvinofadza", 1931). Iri zvakare muchikamu chino apo patinowana rake rakakurumbira basa "Panogara chinokanganwa" (1932-1933). Mushure mehondo, dingindira renyika rinoonekwa mundima dzake uye kudzura akananga kunyika yaakaberekerwa. Zvishoma nezvishoma basa rake rinopfuura mamwe mamwe mafirosofi uye huzivi nhanho.
Luis Cernuda akanyora kakawanda kune iyo kushungurudzika kwerudo, kuiona isingasvikike uye "ichirambidzwa" pamberi pevanhu. Kunzwa kusurukirwa, kusava nerusununguko uye kufamba kwenguva zvinoonekwawo mundima dzake. Saka ndima yake inozivikanwa: "Hwakanga hwakanaka sei hupenyu uye husina basa."
Mitsara uye ndima dzanyanduri
"Isu tinoziva chete kukumbira kutonhora sevana nekutya kuenda vega mumumvuri wenguva."
«Unopembedza hupenyu hwangu: kana ini ndisingakuzive, ini handina kurarama; kana ndikafa ndisingakuzive, handife nekuti handina kurarama ».
"Rusununguko handizive asi rusununguko rwekusungwa mune mumwe munhu wandisinganzwe zita rake asingadedere."
«Mumwe munhu wandinokanganwa hupenyu hushoma uhu, kwaari masikati nehusiku chero zvandinoda kwandiri, uye muviri wangu nemweya zvinoyangarara mumuviri wake nemweya kunge matanda akarasika ayo gungwa rakafashukira kana kusimudzwa zvakasununguka, nerusununguko rudo, chete rusununguko runondisimudzira, rusununguko chete nekuti ini ndinofa.
«Mimwe miviri yakafanana nemaruva, mimwe yakaita semapanga, mimwe yakaita semaribhoni emvura; asi zvese, munguva pfupi inotevera, zvichapisa izvo zvinowedzera mune mumwe muviri, zvichichinja dombo kuita murume kubudikidza nemoto.
Sam Shepard (makore makumi manomwe nemaviri ekuberekwa) inofungidzirwa imwe yeanonyanya kukosha mazuva ano ekunyora. Mabasa ake ekutanga akazvarwa muma60, uye kuwedzera kune yemitambo akanyora zvinyorwa zvemufirimu, mutambi uye muimbi. Maviri emafirimu ake anozivikanwa ari "Mushumo wePelican" y "Vakasarudzirwa kubwinya".
Chaizvoizvo nhengo yeAmerican Academy of Arts uye Tsamba uye sematanho anokudzwa aakawana ndiwo Theatre Pulitzer muna 1979 yebasa rake "Akavigwa Mwana" ("Bored Kid") uye Guggenheim Fellowship.
Ane hukama hwakanaka neNobel Prize yazvino muMabhuku, Bob Dylan waakashanda naye pafirimu "Renaldo naClara" uye pamwe neuyo akanyora rwiyo "Brownsville Girl", imwe yenziyo dzakanakisisa dzaDylan.
Mutambo wake wekupedzisira wakanyorwa wave "Kutonhora muna Chikunguru" (2014).
Sam Shepard naBob Dylan
Mitsara nemunyori anoshanduka-shanduka
«Chokwadi uyu mubvunzo usina kunaka, haufunge? Bvunza mumwe munhu kuti nei vasina mufaro?
Mabhiza akafanana nevanhu. Vanofanira kuziva miganhu yavo. Kana vangovawana ivo vanofara kungofura mumunda.
"Kwangu kwekupedzisira kwokupotera, mabhuku angu, zvinofadza zvakapusa sekuwana hanyanisi dzesango padivi pemugwagwa kana rudo rwakadzoserwa."
"Nyaya iripo ndeyekuti mukadzi wangu anozvinyudza pamapiritsi uye ini ndinonwa, ndicho chibvumirano chatakabvumirana, chidimbu chechibvumirano chewanano yedu."
“Democracy chinhu chisina kusimba. Iwe unofanirwa kutarisira democracy. Ukangomira kuzvidavirira kwazviri uye wozvisiya zvoita nzira dzinotyisa, haisisiri democracy zvakare, ndizvo here? Icho chimwewo chinhu. Inogona kunge iri inch kure nehutongi. '
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Zvinyorwa Zvinyorwa zveZuva: Luis Cernuda naSam Shepard
Valentina Ortiz-Urbina akadaro
Ndinoyemura zvikuru mabasa evaya vanotsunga kutsoropodza maitiro avanogara; kana izvo zvinoratidzira zviroto zvinoshungurudzwa nerombo; kuti havana chavanogona kuita kunze kwekutaridza kurwadziwa kwavo, kusava netariro uye neshurikidzo. Nekudaro, zvinondirwadza kuti ivo vanowana mune zvinyorwa, nzira dzekuratidzira zviroto zvavo zvekukonzera marwadzo, nekuda kwekunakidzwa kwekunzwa kukuru.
Pindura Valentina Ortiz Urbina
Ndine urombo kuti handibvumirani nezvaunotaura kuti vanozviita "nekuda kwekunakidzwa kwekunzwa wakura" ... Zvirinani kwete kusvika kuna Luis Cernuda.
Handibvumiraniwo nezvataurwa naValentina. Ivo havadi kukonzeresa marwadzo, asi kuratidza avo vega, kuifambisa kuburikidza neshoko rakanyorwa. Uye vamwe vanoda kunzwa kunakidzwa uye kutsvaga kubwinya kwekunyora. Asi vamwe zvirokwazvo havana.
Ndatenda nechinyorwa chako, chinonakidza kwazvo. Ini ndadzidza nezve dzimwe nyaya dzandakanga ndisingazive nezvadzo. Akanaka sei mitsara yaLuis Cernuda. Hunhu hwake semunyori hunonyatsooneka mavari. Chimwe chezvinhu zvinosuruvarisa zvinogona kuitika kwauri kuve kutapwa iwe pachako.
Chinyorwa chekunyora kubva kuOviedo.
Luis Cernuda akabatanidzwa nematambudziko akati wandei: kutapwa, kutora hupombwe hwake pasi pevhu nekuti anga asingatariswe zvakanaka kana kutongerwa izvozvo, asingakwanise kuburitsa pachena pfungwa dzake dzezvematongerwo enyika nekutya kutsiva, nezvimwe. Ini handirarame hupenyu hunofadza kwazvo ...
Ndatenda nekutaura kwako! Kumbundira! 🙂
Mhoro zvakare, Carmen.
Hongu, ichokwadi. Aive nezvakawanda zvakasununguka muhupenyu hwake. Ehezve, nderipi rakashata rombo rakaipa raive nemurombo raive nevanhu vazhinji kudaro, vakatanhamara kana kwete, munhoroondo yese. Ini handizive kuti nei ichi chakashata mania chevamwe vasingaremekedze zvematongerwo enyika kana zvechitendero pfungwa kana hutano hwepabonde hwevamwe. Sekunge vanofanirwa kumanikidzwa kuita kana kufunga zvakafanana pavanenge vasiri.
Ini ndaisaziva kuti haana kurarama hupenyu hunofadza kwazvo, asi ini handishamiswe mushure mekuverenga komendi yako.
Kumbundira kubva kuOviedo.
Ini ndichangobva kuverenga nhetembo yaLuis Cernuda yakanzi "Kana munhu achigona kutaura" mawakawana mimwe yemitongo yako. Izvo zvakangouya kwandiri neemail apo ini ndainyorerwa kune yekunyora webhusaiti. Zvakangoitikawo sei kuti iri nhetembo imwechete uye kwete imwe yacho.
Ndine urombo Carmen, asi uyo anofamba naShepard pamufananidzo haasi Dylan, asi shamwari yake Johnny Dark. Shuwiro yakanakisa!
Kurudzira kuda kuverenga nefirimu pfupi iri